Madaxweynaha Tanzania oo arin la yaab leh markale soo rogay | HimiloNetwork
Madaxweynaha Tanzania oo arin la yaab leh markale soo rogay
Posted by: Zakariya in Wararka December 16, 2015	0 236 Views
Muqdisho (Himilonews) – Madaxweynaha Tanzania John Magufuli ayaa diiday in kal-fadhiyada Golayaasha Tanzania dhexdooda lagu qaato cunto–isaga oo taas badalkeeda ku baaqay in shacabka loo muujiyo sinnaanta u dhaxeysa madaxda iyo iyaga.
Magafuli wuxuu hoosta ka xariiqay in qarash badan uu ku baxo qoondada loo sameeyo kal-fadhiyada fudud ee golayaasha dowladda–loona baanan yahay in cabitaan iyo sharaab kaliya lagu qaato shirarka fudud.
Madaxweynaha dhawaan-dhaladka ku ah hoggaanka koobaad ee Tanzania wuxuu taniyo doorashaiisa ku dhaqaaqay arimo xasaasi ah oo soo jiitay indhaha bulshada Afrika iyo caalamka.
Kol dhow ay aheyd markii uu bilaabay inuu qarashkiisa ku bixiyo inuu sariiro ugu iibiyo bukaanada ku jira isbitaallada qaar ee dalka Tanzania. Halka uu diiday inuu lacago badan ku bixiyo safarada cirka ah ee uu ku sameeyo gudaha dalkiisa. Isaga oo taas badalkeeda socdaal dhulka ah safar kula galay baabuurta shacabka.
Previous: Q2aad: Wax Ka Baro Haramacadka
Muslimiinta Faransiiska oo aan in badan kusii tukan doonin waddooyinka Paris.
Qisada Gabadhii – iyada oo kabo la’aan ah – saddex Billad ku guuleysatay!